सम्बोधन | Weekly News of Nepal, Hot News, Weekly Paper
के–के जन्मिने हो माओवादीको अप्राकृतिक खेलबाट ?
July 8, 2016 मुख्य समाचार No comments
एउटा सरकारमा बसेर अर्काे सरकार बनाउन माओवादीले गरेको कसरत र कांग्रेसलाई बार्गेनिङचिप्स बनाएर गरेको अर्काे बहुमतीय सरकारको तयारीलाई सहमतीय सरकार बनाउने प्रयासका रुपमा लिन सकिंदैन । ‘प्रधानमन्त्री करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेजस्तो होइन, उहाँ कुनै दलको करारनामामा सही गरेर सरकार चलाउने मुडमा हुनुहुन्न, आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्नुहुन्छ । जुनसुकै दल सरकारमा रहने नरहने निर्णय गर्न... [ Read more → ]
नक्कली डाक्टरले यसरी पाए उन्मुक्ति
July 8, 2016 समाचार No comments
काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरु अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । २ जना साधरण तारेखमा छुटेका छन् भने अन्य ३४ जना धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । अदालत नै पिच्छे फरक फरक आदेश भएको थियो, केही सामान्य धरौटीमा राखेर छुटे भने केहीले ३५ लाख रुपैयाँसम्म राखेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये १२ सरकारी अस्पतालमै काम गरेका थिए... [ Read more → ]
ओलीको साथ छोडे प्रचण्ड कहाा पुग्लान् ?
राजनीतिक तर्क र आधारविना नै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने ओली सरकार ढलिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा अन्तिम उम्मेदवार मात्रै हुन् प्रचण्ड । काठमाडौं । सरकार ढाल्ने र नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने प्रयासस्वरुप कांग्रेस नेतृत्व र माओवादी केन्द्रका एकथरी नेताहरुको भित्री सक्रियता पछिल्लो पटक बढेको छ । दिल्लीको भ्रमण सकेर फर्केपछि सरकार ढाल्न बैशाख... [ Read more → ]
यस्तो रैछ माओवादीसाग हिंड्दाको शंका
काठमाडौं । सरकार फेर्न माओवादी केन्द्रले देखाएको सक्रियताप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै आश्वस्त हुन सकेको छैन । ‘नौ बुँदे सहमति’ ‘भद्र सहमति’ र ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ तीनवटा फरक फरक कुरामा एमालेसँग वार्गेनिङमा माओवादी रहेकाले कांग्रेस माओवादीसाग आश्वस्त हुन नसकेको हो । ‘नयाँ सरकार बनाउने भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आउनुपर्छ भनेका छौं’... [ Read more → ]
सशस्त्र र गुप्तचरमा बढुवाको दौडधुप
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा डिआईजीको पद रिक्त भएको करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । डिआईजी दुर्गा बहादुर कुँवरले राजिनामा दिएर अमेरिका गएको करिब वर्षदिन पुग्न लागेको छ । तर बढुवाको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । समयमा बढुवा नहुँदा एकातर्फ प्रहरीको प्रहरीको कामकारबाहीमा असर परेको भने अर्काेतर्फ तल्लो तहका प्रहरीको करिअरमा असर परेको... [ Read more → ]
ट्रेड युनियनविवाद : उपलब्धी गुम्ने खतरा, एमालेको गुटबन्दी निजामती कर्मचारीमा छरपष्ट
काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनले ब्यवस्थित गरेको ट्रेड युनियन अधिकार एमाले कर्मचारी बृत्तमा देखिएको गुटबन्दीका कारण ऐतिहासिक उपलब्धि नै गुम्ने खतरामा पुगेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको भागमा परेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र ८ केन्द्रीय सदस्य पदहरु टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसै बिषयलाई टुंगो... [ Read more → ]
लोकमानबिरुद्ध लोकमा यस्तो जागरण
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफू अनुकुलका अभियोगीलाई उन्मुक्ति दिने र मन नपरेकाहरुसँग बदला लिन अख्तियारको मर्यादा उल्लंघन गर्ने काममा कार्की सक्रिय रहेको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको हो । मंगलवार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यालय सचिव... [ Read more → ]
कांग्रेससाग गठबन्धन बनाउँदा माओवादीका नोक्सानी
२०५ सिटको कांग्रेसको समर्थनमा बन्ने ९० सिटे माओवादी नेतृत्वको सरकारले अहिलेजस्तो लोकप्रिय कामको जस लिने अवसर पाउला कि अहिले विरोध गरिएका काम कांग्रेसको निर्देशनमा भटाभट गर्दै जानु पर्ला ? काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढाल्न यतिवेला सत्तासीन माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु कांग्रेसँगका भित्री संवाद र ‘मिडिया बाइट’मा सक्रिय छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी... [ Read more → ]
प्रहरीकै संरक्षणमा करोडौंको धन्दा
काठमाडौं । फ्रान्समा जारी यूरोकपको क्रेज नेपालमा पनि व्यापक छ । राती अबेरसम्म बसेर फुटबल हेर्ने मात्र होइन नेपालमा हजारौं युवाहरु करोडौंको बाजी पनि चलाउ‘दै आएका छन् । खुलेआम रुपमा करोडौंको बाजी चल्दा पनि प्रहरीले त्यसमा ध्यान दिएका छैनन् । प्रहरीसँगै राम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुले बाजी खेलाउने भएकाले यसमा प्रहरीकै मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।... [ Read more → ]
यसरी फसे माओवादीका सांसद
काठमाडौं । मानव तस्करी र कीर्ते काण्डमा माओवादीका आठ सांसद तानिएका छन् । यूरोप घुम्ने लोभमा फस्दा उनीहरु ठुलो लफडामा परेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागको पत्र कीर्ते गरी आफ्ना सहयोगी भनेर विभिन्न व्यक्तिलाई यूरोप छिराउन खोजिएको थियो । त्यसरी लोभमा फस्ने सांसदहरु गोमा कुँवर, डोरप्रसाद उपाध्याय, सिर्जना तमारु खत्री, सन्तकुमार थारू, रूपा... [ Read more → ]
© 2017 सम्बोधन